FBC - Shawaa Kaabaatti lafa waggaa dheeraaf osoo hin misoomin turerratti dargaggoonni hojjechaa jiru
Shawaa Kaabaatti lafa waggaa dheeraaf osoo hin misoomin turerratti dargaggoonni hojjechaa jiru
Finfinnee, Ebila 8,2010(FBC)-Godina Shawaa Kaabaatti abbootii qabeenyaa lafa fudhatanii osoo hin misoomsin yeroo dheeraaf tursan irraa lafti heekataarri 502 deebisiisfameera.
Laficharrattis dargaggoonni 5711 irratti gurmaa’uun hojii uummataniiru.
Lafa hektaara 502n aanaalee godinichaatti fudhatamee osoo hin misoomin waggaa 5 fi 10 ture kana keessaa lafti heektaarri 123 lafa albuubaa ture.
Haalli laficha deebisuu dadhabsiisaa akka ture itti gaafatamaan Eejansii Carraa Hojii Uumuu fi Wabii Nyaata Magaalotaa Godina Shawaa Kaabaa obbo Tasfaayee Haaylamaariyam himaniiru.
Akka obbo tasfaayeen jedhanitti waldaaleen albuudarratti gurmaa'an hanga ammaatti waliigalaan Birrii miiliyoona 11 ol kan qusatan ta'us, baay'ina waldaalee aanaalee godinchaa keessatti albuudarratti gurmaa'aniin yoo madaalamu ammas quubsaadha jechuun hin danda'amu.
Obbo Tasfaayen FBCtti akka himanitti, sababiin rakkinichaa waldaaleen gurmaa'an marti haala barbaadamuu fi humna guutuudhaan hojiitti galuu dhabuu fi dhiyeessin meeshaalee murteesoo gahaa ta’uu dhabuudha jedhan.
Oduuwwan Biroo « Ityoophiyaa fi Maaltaan oomishoota qaraxaan ala galchuuf waliigalan	Ijaarsi daandiin asfaaltii Dabra Taabor – Jaaragandoo kiloomeetirri 88 xummurame »